Iyo nyowani vhezheni yeNTFS-3G 2021.8.22 inosvika ichigadzirisa 21 kusagadzikana | Linux Vakapindwa muropa
Mushure mechinguva anopfuura makore mana kubva kuburitswa kwekupedzisira, vhezheni itsva ye "NTFS-3G 2021.8.22" yaburitswa iyo inosanganisira yakavhurika sosi mutyairi inoshanda munzvimbo yemushandisi uchishandisa iyo FUSE mashandiro uye seti ye ntfsprogs zvinoshandiswa kushandisa NTFS zvikamu.
Mutyairi anotsigira kuverenga nekunyora dhata pazvikamu zveNTFS uye anogona kumhanya pane akasiyana masisitimu anoshanda anotsigirwa neFUSE, anosanganisira Linux, Android, macOS, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Solaris, QNX, uye Haiku.
Iyo driver-yakapihwa kuitiswa kweiyo NTFS faira system Inoenderana zvizere neWindows XP, Windows Server 2003, Windows 2000, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8 uye Windows 10. Iyo ntfsprogs suite yezvishandiso inoita kuti iwe ugone kuita mashandiro senge NTFS yekuparadzanisa kugadzirwa, kutarisa kutendeseka, kuumbana, kudzoreredza, uye kudzoreredza mafaira akadzimwa. Izvo zvakajairika zvikamu zvekushanda neNTFS zvinoshandiswa mutyairi uye zvinoshandiswa zvakaendeswa kune raibhurari iri yoga.
Main nyowani maficha eNTFS-3G 2021.8.22
Kuburitswa kweiyi vhezheni itsva yeNTFS-3G 2021.8.22 inomira yekugadzirisa 21 kushupika avo vanoverengeka vavo inogona kubvumidza anorwisa kuti ashandise yakaipa faira reNTFS -mufananidzo faira kana yekuchengetera kwekunze iyo inogona kumhanyisa kodhi yekuremekedza kodhi kana uyo anorwisa aine mukana wekupinda uye iyo ntfs-3g binary iri setuid midzi, kana kana iye anorwisa aine mukana wemuviri kune chiteshi chekunze kukombuta iyo yakagadzirirwa kumisikidza iyo ntfs-3g binary kana chimwe chei ntfsprogs maturusi kana ekunze kwekuchengetedza kwakabatana kune komputa.
Kunetseka uku ndiwo mhedzisiro yekusarongeka kweimwe NTFS metadata izvo zvinogona kukonzera buffer kufashukira, iyo yekurwisa inogona kushandisa. Nzira dzakajairika dzevanorwisa kuwana mukana wemuviri kumuchina ndewekugadzira zvemagariro kana kurwisa komputa isingatarisirwe.
Kudzvinyirirwa vakaverengwa pasi peCVE inotevera: CVE-2021-33285, CVE-2021-35269, CVE-2021-35268, CVE-2021-33289, CVE-2021-33286, CVE-2021-35266, CVE-2021-33287, CVE-2021-35267, CVE -2021-39251, CVE-2021- 39252, CVE-2021- 39253, CVE-2021- 39254, CVE-2021- 39255, CVE-2021- 39256, CVE-2021- 39257, CVE-2021- 39258, CVE- 2021 -39259, CVE-2021-39260, CVE-2021-39261, CVE-2021-39262, CVE-2021-39263
Uye zvibodzwa zvakatangira pane yakaderera 3.9 kusvika kune yepamusoro 6.7, isina kana imwe yekukuvadzwa yakagadziriswa yakaratidzirwa seyakakwira uye yaida kutarisirwa nekukurumidza.
Kune rimwe divi, nezve shanduko dzisina hukama nekuchengeteka muNTFS-3G 2021.8.22, tinogona kuwana semuenzaniso iyo kusanganiswa kwekodhi mabhesi eakagadzika uye akawedzeredzwa edhisheni yeNTFS-3G, pamwe nekuchinjisa kwekuvandudza chirongwa kuGitHub. Uye zvakare, iyi vhezheni nyowani inosanganisirawo kugadzirisa mabug uye matambudziko ekuumbiridza neshanduro dzakapfuura dze libfuse.
Sega, iyo Vagadziri vakaongorora mhinduro pane yakashata NTFS-3G kuita uye kuongororwa kwakaratidza kuti nyaya dzekuita zvinowanzo kuve zvine chekuita nekuendeswa kweyechinyakare vhezheni yeiyo purojekiti mukugovera kana kushandisa zvisirizvo zvisirizvo zvigadziriso, sekukwira pasina iyo "big_writes" sarudzo, pasina iyo iyo faira yekumhanyisa kumhanyisa inoderera 3-4 nguva.
Zvichienderana nekuyedzwa nechikwata chekuvandudza, iko kuita kweNTFS-3G kunosara kumashure kwe ext4 ne15-20% chete.
Chekupedzisira, zvakakoshawo kutaura kuti masvondo akati wandei apfuura Linus Torvalds akakumbira Paragon Software kuti iendese kodhi yacho kuti ibatanidze mutyairi wake mutsva weNTFS. Panguva iyoyo zvaifungidzirwa kuti mutyairi anogona kuwedzerwa muLinux 5.14-rc2, izvo zvisina kuitika, asi ichave iri kubatanidzwa mune vhezheni yeLinux 5.15
Izvi zvaive nekuti kuve nekuwana kwakazara kune zvikamu zveNTFS kubva Linux, iyo FUSE NTFS-3g mutyairi aifanirwa kushandiswa, iyo inomhanya munzvimbo yemushandisi uye haipe iyo yaunoda kuita.
Zvese zvaiita kunge zviri kuenda kuParagon, asi mazuva mashoma apfuura, Linus Torvalds Haana kufarira nzira iyo Paragon yaakatumira meseji yekusimbisa yekubatanidzwa kwekodhi muKernel, iyo yaakatanga nhevedzano yemashoko achishoropodza mamiriro aya. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, iwe unogona kutarisa iyo ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Iyo nyowani vhezheni yeNTFS-3G 2021.8.22 inosvika ichigadzirisa 21 kusagadzikana
Linux 5.14 inouya neDPI 400 kutsigira, zvinowedzera EXT4, madhiraivha, KMV nezvimwe